Waa In Aan Xiriir La Yeelanaa Israa’iil – Burhaan » Axadle Wararka Maanta
Waa in aan xiriir la yeelanaa Israa’iil – Burhaan
Khartoum – Jeneraalka ugu sarreeya Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ayaa sheegay in “Xiriirka Sudan iyo Israa’iil laga yaabo inuu ugu dambeyntii uu caadi ku soo noqdo.”
Wareysi uu siiyay shabakadda Al Arabiya oo la daabacay Jimcihii, al-Burhaan wuxuu intaas ku daray in la caadiyeyo xiriirkaIsraa’iil ay la yeelanayaan”ay lagama maarmaan tahay in Suudaan lagu soo celiyo beesha caalamka.”
Sababta ugu weyn ee keentay go’aanka Suudaan ay ku caadiyeyneyso xiriirka ay la leedahay Israa’iil sanadkii hore ayaa ahaa mid ka soo farcamay go’aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khartoum uga saaray liiska madow ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaha taageera argagixisada.
Al-Burhaan ayaa xukunka la wareegay, wuxuuna xiray Ra’iisul Wasaare Abdalla Hamdok 25-kii October, balse cambaareyn caalami ah iyo mudaaharaadyo ballaaran ka dib, wuxuu dib u soo celiyay Ra’iisul Wasaaraha muddo bil ku dhow, heshiiskaas oo in badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha dimuqraadiyadda ay ka soo horjeesteen.
Mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo afgambiga ayaa marar badan ka dhacay magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi, kuwaas oo lagu dalbanayey in ciidamada qalabka sida ay ka fogaadaan oo ay faraha kala baxaan dawladda. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa ka hortagay dibadbaxyada, waxaana ay dileen dhowr iyo toban qof oo dibadbaxayaal ahaa.
Al-Burhaan ayaa u sheegay Al Carabiya in heshiiska lala galay Xamdok “uu yahay bilow dhab ah oo ku meel gaar oo dalka marxalada kumeel gaarka loga saarayo,” isagoo ku andacoonaya in “hawlaha intooda badan ee ku-meel-gaarka ah aysan fulin xoogag siyaasadeed.”
Waxa uu yiri “dhammaan dadka reer Suudaan waay taageersan yihiin go’aannadayada, qaar ka mid ah dadka samileyda ayaa diidan.”
Waxaana uu ku adkaystay in aanu doonayn in uu dalka hoggaamiyo, isla markaana aanu isku soo taagin jagada madaxtinimo ee dalka Suudaan, waxaanu yirii: “Waxa aan leeyahay hawl gaar ahtaas oo aan marki horeba ku dhaartey in aan uu adeego dadka iyo ciidankaba, kaas oo ah dhamaystirka xilliga KMG ah. Uma tartami doono jagada madaxtinimo xataa haddii la i yirahdo. Hadafkaygu wuxuu ku dhammaanayaa dhammaadka xilliga ku meel gaarka ah.”
Mar lagu soo hadal qaadey Mawduuca mudaaharaadayaasha naftooda ku waayey, ayuu guud ahaan sheegay in mudaaharaad nabadeed uu yahay mid “xaq oo loo dammaanad qaaday dhammaan shacabka,” in dhimashadii dhacday ay tahay “wax aan la aqbali karin, waxaana la xisaabtami doonnaa ayuu yiirii kuwa ku lug lahaa.”
Bishii la soo dhaafay barta wararka ee Walla ee Israa’iil ayaa sheegtay in wafdi Israa’iiliyiin ah ay booqdeen Suudaan afgambiga ka dib, iyagoo la kulmay hoggaamiyeyaasha millatariga si ay aragti wanaagsan uga helaan xaaladda kacsan ee waddanka ku yaalla Bariga Afrika iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto dadaalka lagu doonayo in lagu dhammeeyo heshiiska lagu soo celinayo xiriirka diblumaasiyadeed sudan iyo isra’iil.
Wafdigan oo loo badinayo inay ku jiraan wakiilo ka socda hay’adda sirdoonka ee Mossad ayaa la kulmay Abdel Rahim Hamdan Dagalo, oo ah jeneraal caan ah oo ka tirsan ciidamada Taageerada koofiyo caasta, oo ah ciidamada bolismitaarka Sudan ee ka qeyb qaatay afgambiga, sida uu sheegay Walla.
Waxay ahayeen millatariga, ma aha hoggaanka rayidka, ee Suudaan ka door firfircoon ka qaatay horumarinta soo ceelinta xiriirka Israa’iil sannadkii hore. Burhaan waxa uu ahaa xubin firfircoon ee ugu caansanaa ee hogaaminayey dadaallada caadiga loga dhigaayo xiriirka ay la yeeshan Israa’iil.
(This story #Waa in aan xiriir la yeelanaa Israa’iil – Burhaan. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.